Arc Welding Machine, Anotakurika Mig Welder, Mma Welding Machine - Andeli
● zvachose 5.5KG, compact uye inotakurika, nyore uye nyore kushandisa
● tanga arc zviri nyore, yakagadzika welding arc, yakadzika weld dziva uye Beatiful welding chimiro
● inopisa inotyisa arc yazvino inogadziriswa iyo inogona zvakanyanya kuvandudza arc-kutanga basa
Chigadzirwa chigadzirwa inyaya yekusingaperi, asi zvakare chakakosha chinhu kumabhizinesi anoenderana nemusika.
Chikamu svetuka yepasi rose yemakambani tarisiro, ichave iri mhando yezvigadzirwa kubva pazuva rekugadzwa kweiyo yakanyanya yemakambani hupenyu kutungamira basa.
MZ-1250 Inverter DC otomatiki akanyudzwa ARC Welding ...
MZ-1000 Inverter DC otomatiki akanyudzwa ARC Welding ...
Nhanganyaya IGBT MODULE ...
MIG-250Y Inverter CO2 gasi yakashongedzwa nemuchina wekutema
MIG-250F Inverter CO2 gasi yakashongedzwa nemuchina wekutema
CUT-120 Inverter DC mhepo yeplasma cutter
Nhanganyaya IGBT TYPE ● ...
MIG-200 Inverter CO2 gasi yakashongedzwa nemuchina wekutema
Andeli Group Co, Ltd, yakavambwa muna 1985, iri munzvimbo hombe yekugadzira yemidziyo yemagetsi yakadzika-pasi yeLiushi China, iyo inonzi "iyo Midziyo yeMagetsi Metropolis yeChina". Andeli Boka Co, Ltd iboka rinotungamira mune yemagetsi indutry, ine kugadzirwa, kwesainzi, kutakura, kupinza uye kutengesa kunze kwenyika, kudyara. Isu tiri boka rakakura risina matunhu mashoma, muchinjikwa-maindasitiri muChina. Andeli ane makambani gumi nemaviri akabata muShanghai, Hunan, Zhejiang, UAE uye anopfuura 300 makambani anoshanda. Andeli ane pamusoro pevashandi vanopfuura 3000 vane zviwanikwa zveUS $ 150,000,000 mu235,000 mativi emamita. "ANDELI" chiratidzo chinozivikanwa sechimwe chezviratidzo zveChinese zvinonyatsozivikanwa.Andeli anoona mhando yezvigadzirwa sehupenyu …… ..
Mbudzi / 19/2020
Plasma yekucheka muchina ndeimwe yenzira dzakanakisa dzekucheka simbi, simbi isina chinhu, ndarira nealuminium. Unogona kucheka simbi nekukurumidza uye nemazvo nekuti inopisa kuburikidza nesimbi yeplasma. Mukusarudza chaiyo plasma yekucheka muchina, isu takanyora gwara kuzvinhu gumi. Kana iwe uchifarira b ...
127th Canton Fair Online, ANDELI mira Nha .: 11.3, B28-29 C10-11
Andeli Boka rave kuda kutora chikamu muInternet Canton Fair mazuva maviri gare gare. Iyi online Canton Fair ichaitwa kubva munaJune 15th kusvika 24th, 2020. Vashandi vekutengesa vekambani yedhipatimendi rebhizinesi rekunze, vachabatwa zvisina kumiswa kutepfenyurwa kwepamhepo kubva pa9 am. kusvika 9 pm. Beijing ...
ANDELI Budirira Mune Iyo 117th Canton Fair
ANDELI zvakare anounganidza tarisiro ku117th Canton Fair kubva 15th Kubvumbi 2015 kusvika 19 Kubvumbi 2015. Munguva yemutambarakede, ANDELI anoratidza akateedzana ezvigadzirwa zvichangogadzirwa izvo zvakarumbidzwa zvakanyanya nevatengi vekunze uye vamwe. With ayo siyana zvigadzirwa, yepamusoro michina, mukuru Q ...